महागुरु फाल्गुनन्दको उदय र देन - Limbuwan khabar
महागुरु फाल्गुनन्दको उदय र देन
बिहिबार, २७ कार्तिक, २०७७ बिहानको ०६:१९ बजे, लिम्बुवान न्युज
पूर्वी नेपाललाई पश्चिमेले पल्लो किरात भन्दछन् । यसको अर्थ वल्लो र माझ किरात पनि छन् । पल्लो किरातलाई लिम्बुवान पनि भनिन्छ । लिम्बुवानका ताप्लिजोङ, पाँचथर र इलाम जिल्लाहरू भौतिक रुपले पनि प्राकृतिक सौन्दर्यका रानी हुन् । भौतिकमात्र होइन आध्यात्मिक हिसाबले पनि यी भूमि मानवीय चेतनाका खानी हुन् । यी भूभागमा विभिन्न विभूतिहरू जन्मिए । अझ, किरात लिम्बू सभ्यताको सृष्टि र विकास पनि यही सेरोफेरोबाट भयो । लिम्बू जातिको मौखिक शास्त्र मुन्धुमले यही भूमिको सभ्यता र इतिहास कहन्छ । लिम्बू मातृभाषामा यहाँका हिमालपर्वत, डाँडाकाँडा, खोलानाला, वनजंगल, जीवजन्तु र चराचर जगत बोल्दछन् ।
मानवीय विकास र शोषणसँगै सोही प्रकृति र मानव जीवनलाई बुझ्ने विभिन्न धारणाहरू हावी हुँदै आए । यही धारणाले विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक मत र पन्थहरू सिर्जना गर्दै लग्यो । पहिलेको सावायेत्हाङ पाङ्भे अर्थात् आठराजवंशको गाउँलाई पछि किरात भूमि याक्थुङ लाजे ‘लिम्बुवान’को नामले चिनिन थाल्यो । उहिले ढालफाँड गरेर अहिलेका लिम्बूजाति तथा आदिवासीमात्र रहेको सो ठाउँमा पछि सबै जातजातिहरू बस्न आए । समय, परिस्थिति र मानवीय स्वार्थले मिलेर बसेका विभिन्न जातजातिहरू बीचमा केही द्वन्द्वहरू सुरु भए । यहाँ मिलेर बसेको समाजलाई त्यहाँका शासकहरूले विभिन्न स्वार्थमा भजाउन थाले । आ–आफै बीचमा पनि विभिन्न स्वार्थ र शक्तिका खेलहरू भए । यस्तो अवस्थालाई सबै मान्छेले सही अर्थले बुझ्ने कुरा भएन । ज-जसले आफ्नो व्यावहारिक चेतनाले देश, काल, जाति र समाजका समस्याहरू बुझे उनीहरूमा समाधानका केही विकल्पहरू पनि आउन थाल्यो । तिनीहरु नै कालान्तरमा महान व्यक्तित्व भए । सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीति नेतृत्व भए । लिम्बुवानमा यस्ता सोधुङ्गेन लेप्मुहाङ, कान्देनहाङ, माबोहाङ, सिरिजङ्गा (हाङ्) र फाल्गुनन्द लगायतका नामहरू आइरहन्छन् । यिनीहरू र यिनका पदचापहरू किरात लिम्बू समाजका पथप्रदर्शक मार्गदर्शनहरू हुन् । अरु सबै जातजातिमा पनि यस्ता मार्गदर्शक अग्रजहरू छन् । फरक यति हो, कतिका ज्ञात त अझै कति अज्ञात छन् ।
लेखकः डि बि आङ्बुङ
नेपालको इतिहासमा किरात शासनकाल भएको तर सबै बाहिर नआएको वा नल्याइएको जस्तै पल्लो किरात लिम्बुवानको इतिहास पनि मधुरो छ । जे छ मौखिक मुन्धुम र कथा कहानीहरूमा छन् । अझ, पल्लो किरातको लिम्बुवानको इतिहास र मुन्धुमलाई स्वदेशी शासकहरूले नष्ट गर्न मात्र खोजे । धन्न केही विदेशी शासक बिएच् हज्शन जस्ताले आफ्नो स्वार्थकै लागि सही, बेलयाततिर लगेर राखे । किरात इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङले व्यक्तिगत दुःख, सङ्घर्ष र त्यागले एक हदसम्म किरात मुन्धुम, इतिहास, भाषा र साहित्यलाई लेखी छाडेर गुन लाए । यसले सिङ्गो किरात जाति तथा नेपाली इतिहास र साहित्यमा अतुलनीय योगदान पुग्यो ।
नेपालको भौगोलिक एकीकरण हुनअघि यहाँका विभिन्न राष्ट्र र राष्ट्रियताहरू हुर्कंदै थिए । तत्कालीन समय र परिस्थिति अनुरुप आफ्नै बुँता, मौलिक शैली तथा पहिचानमा हुर्किरहेका थिए । ती राष्ट्र र राष्ट्रियताहरूलाई आफ्नै धार र पहिचानमा हुर्कन दिइएन । अनेक जालझेल र षडयन्त्रका बाबजुत उनीहरूको भूमिलाई भौगोलिक रुपमा कब्जा गरियो । मानवीय संस्कृति, धर्म र भाषामाथि दमन गरियो ।
नेपालको इतिहासमा यो क्रम शाहहुँदै निरङ्कुश राणा शासनसम्म आईपुग्दा पल्लो किरात लिम्बुवानका लिम्बू नेतृत्वहरूलाई सुब्बा बनाइयो । सुब्बाहरू शाह र राणा शासकका स्थानीय प्रतिनिधिका रुपमा रुपान्तरित भए । उही शाह तथा राणा शासकहरूद्वारा पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा लड्न र मर्नका लागि ब्रिटिश-गोर्खा सेनाका रुपमा विदेशमा बेचिए । स्वदेशमै भएका लिम्बूहरूलाई सुब्बा बनाएर कज्याउन थालियो । एकापसमै भिडाउँदै ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति अनुरुप शासन र शोषण गर्न थालियो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लड्न र मर्नका लागि जबर्जस्ति पठाइएका जनजातिहरूले त्यतिखेर धन त के तन बचाएर ल्याउन नै अहोभाग्य थियो । बाँकी रहेकाहरू मुङ्लान, भटाङ, सिक्किम र आसाम गएर आनासुकी कमाई परिवारको गुजारा गर्दथे । ठीक त्यसैबेला, लिम्बुवान भूमिमा शासकले पठाएका विभिन्न जात जातिहरूलाई आफ्नो किपट जमिन दिँदै रस्ती रसाउनु र बस्ती बसाउनु पर्ने सरकारी नीति आयो । आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउन तथा समाज चलाउनकै लागि किपटीया सुब्बाहरूले आफ्नो जमिन बन्धकी राख्नु पर्ने भयो । विस्तारै, त्यही जग्गा बन्धकी राख्दै घर–परिवार, विवाह–बर्खन्त, रीतभात र राजनीति समेत चलाउनु पर्ने भयो । यहीबेला, सुब्बाको सभाङ्गी प्रभावले समाजमा अनेकन ढर्रा र विकृतिहरू पनि मौलाउँदै गए । विशेषतः खानपान र घर व्यमवहार सञ्चालन तथा विभिन्न कार्जेहरू चलाई र चाडबाड मनाइमा अति नै खर्चालु कार्यकलापहरू हुन थाले । यसमा विश्व बजारको पुँजीवादी तथा नवउदारवादी प्रभाव त छँदै थियो ।
यसरी, एकातिर राजनैतिक तथा प्रशासनिक रुपमा लिम्बू नेतृत्वहरू सुब्बा सुभाङ्गीमा खुम्चेर राणा तथा शाह शासकहरूको पञ्जा र नियन्त्रणमा पर्दै जानु । अर्कोतिर, अधिकार र स्रोत साधनरहित धाक र रवाफहरू चाहिँ कायमै बढ्दै जानुजस्ता प्रवृत्तिको विकास भयो । फलस्वरुप, तत्कालीन अवस्थामा लिम्बुवानको राजनीति तथा किरात लिम्बू समुदायको अवस्था नाजुक हुँदै गयो । त्यसबखत, त्यस्तो अवस्थाबाट बेलैमा बच्न केही सचेत नेतृत्वहरूले विशेष पहल नगरेका पनि होइन । तर, राजनीतिक हिसाबले त्यस्तो प्रतिरोधका कार्यकलापहरू गर्न सकिने अवस्था थिएन । हो, उन्नाइसौं शताब्दीको त्यही जर्जर अवस्थाले पल्लो किरात लिम्बुवानमा एक सामाजिक नेतृत्व तथा समाजसुधारक व्यक्तित्व महागुरु फाल्गुनन्दको उदय गरायो ।
मुन्धुममा महागुरु तथा मुइगुम् अङ्सी:
त्यसो त किरात याक्थुङ मुन्धुम शास्त्रमा यस्ता समाजसुधारक गुरुहरूको आवश्यक पर्ने वा उदय हुने आफ्नै विशिष्ट परम्परा पनि छ । जसलाई मुइगुम् अङ्सी मुन्धुम् पाचाथिम् भनिन्छ । यो येहाङ मुन्धुम् अन्तर्गत आउँदछ । मुन्धुम अनुसार यस्ता आठमार्ग (येत्छाम्थिम्) वा कर्म छन् । ती मार्ग वा कर्महरू फेदाङ्मा (गृहस्थीकर्म), साम्बा (कलाकर्म), येबा (मनोविज्ञान), येमा (युमा/महिला विशेष), साम्मुन्धुम् येप्मुन्धुम(अध्यात्म), सिदापाङ्दा (औषधोपचार), तुम्म्याङ/सुहाङ्मा (न्यायिक) र मुइगुम अङ्सि (ध्यानसाधना तथा दर्शन) हुन् । मुन्धुम अनुसार किरात लिम्बू जातिमा यी कर्मकर्ता द्रष्टाहरू विभिन्न कुल र वंशमा आइरहन्छन् । यिनीहरू आउने निश्चित बाटो, वंश र समय हुन्छ । कति त लिम्बूबाहेक अरु जातिमा पनि आउन सक्छन् । तर, त्यसलाई चिन्न र जान्न आवश्यक हुन्छ । र, आउने वातावरण पनि बनाउन सक्नु पर्दछ ।
मुन्धुम अनुसार मानवीय पुर्खा मुजिङ्ना खेयङ्ना (महिला), उनका छोरा सावा युङ्पुङ्गेम्बा, र बुहारी तेत्लारा लाहादङ्नाका सन्तान सावायेत्हाङ तथा पेगिफाङ्हाङहरू हुन् । उनै पुर्खाहरू यस कर्म र ज्ञानका मूलस्रोत मुहानहरू हुन् । तिनैका सन्तानहरू सोधुङ्गेन लेप्मुहाङ, कान्देनहाङ, साम्बःङ्हाङ येत्इङ्हाङ, माबोहाङ, सिरिजङ्गा (हाङ)हरू मुहिगुम् अङ्सी हुन् । यिनै मुन्धुमी धारका सर्वस्वीकार्य एक अन्तिम अङ्सी महागुरु फाल्गुनन्द हुन् । उहाँपछि धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देन ‘सेइङ’(लारुम्बा), गुरु देवबहादुर तुम्बापो (हात्तीलेदा) र ओमनन्द (राई) लगायतले सो विरासतको निरन्तरता दिइरहेको मानिन्छ ।
महागुरुको जीवनकाल र देन:
महागुरु फाल्गुनन्द उदाउने पारिवारिक क्षितिज भने एक्दमै साधारण लिम्बू परिवार थियो । उनी वि.सं. १९४२ साल कात्र्तिक २५ गते आइतबारका दिन लिम्बुवान इलामको चुक्चिनाम्बा भन्ने गाउँमा जन्एिका हुन् । सानो दुधेबालक हुँदै आफ्नो जन्मदिने आमाविहीन हुनुपर्यो । टुहुरा बालकले बाल्यकालमै असाध्यै दुःखले हुर्कनु पर्यो । यद्यपि, उनी विशेष पृथक स्वाभावका थिए । किशोरावस्थामा पुग्दा उनको बुबा र सानीआमा पनि अन्यत्र बसाइँ सरे । तर, फाल्गुनन्द गएनन् । उनी नजिकै आफन्तकामा रहे । उनले त्यही गाउँमै दुःख–सुख र बुनीबुँतो गर्दै जीवन गुजारा गर्न थाले ।
वि. सं. १९६० सालतिर छिमेकी देश उत्तरको तिब्बतमा दलाइ लामाको राज्य थियो । दक्षिणपट्टिको भारतमा ईष्ट इण्डिया कम्पनीका मालिक अङ्गे्रजको शासन थियो । आफ्नो देश नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनको दबदबा थियो । यसैबेला, फाल्गुनन्द आफ्ना साथीभाइसँग तिब्बतमा हिउँ काटेर बाटो बनाउने कुल्ली कामगर्न गए । त्यहाँ उनी हिउँ पहिरोमा समेत परे । कति साथी गुमे । तर, फाल्गुनन्द भने संयोगले बाँचेर आए । फेरि उनी २२ वर्षको हुँदा वि. सं. १९६४ मा पारिवारिक परिबन्दले बर्मा पुगी करकापमा ब्रिटिश–गोर्खा फौजमा रिक्रुट समेत हुनुप¥यो । फौजी जीवनमा फाल्गुनन्दले अनेक दुःखकष्टका साथ नयाँ अनुभवहरू समेत सँगाल्ने अवसर पाए । गाउँबाटै आध्यात्मिक आचरण अपनाएका फाल्गुनन्दले फौजी पल्टनमा हुँदा पनि सेवा प्रार्थना गर्न छोडेनन् । लाहुरे भएको ८ वर्ष बित्दा नबित्दै पहिलो विश्वयुद्ध शुरुभयो । त्यतिखेर, उनी हवल्दार भइसकेका थिए । उनले अब बर्माको जंगलहुँदै युरोपसम्म लडाइँमा जानुप¥यो । यद्यपि, लाहुरे फाल्गुनन्दले आफ्नो अहिंसावादी मान्यता अनुसार बन्दुक बोकेर पनि कसैको ज्यान लिएनन् । उनको ज्यान पनि सुरक्षित रहयो । उनको मान्यता ती दुश्मन आफ्ना शत्रू थिएनन् । त्यसैले, उनीहरूलाई गोली हान्नु हुन्न । अरुलाई हिङ्सा नगरेपछि आफूलाई आफूमाथि पनि हिङ्सा नहुने कुरामा उनी विश्वस्त रहे । यसरी, प्रथम विश्वयुद्ध सकिएपछि पनि वि. सं. १९७५ मा नागाल्याण्डमा जानु पर्यो । त्यहाँ ६ महिना बसेर पल्टनमा फर्केपछि उनले लाहुरे जीवन नजिउने अठोट लिए । र, आफ्नो नाम काटेर स्वदेश नेपाल फर्किए ।
यसरी गाउँको बुनीबुतो, तिब्बतको कुल्लीदेखि ब्रिटिश–गोर्खा फौजको लाहुरे सैनिक जीवनसम्म भोगेका फाल्गुनन्दले आफ्नो आध्यात्मिक तथा सामाजिक जागरणको मार्गलाई नै पछ्याउँदै नेपाल आए । वि. संं १९७८ सालमा फाल्गुनन्द आफ्नो जन्म गाउँ चुक्चिनाम्बा आए । उनले देश विदेशमा अनुभव र अनुभूति गरेका ज्ञानका आधारमा विभिन्न जनजागरण जगाउने तथा जनचेतना फैलाउने कार्यहरू गर्न थाले । शिक्षा र जनचेतनाको अभावले पछि परिरहेको आफ्नो समाज र समुदायलाई ब्यूँताउने सामाजिक संस्थाको रुपमा उनले धार्मिक मन्दिर माङ्हिमहरू स्थापना गर्नेतर्फ जोड दिए । साथै, लिम्बुवानका विभिन्न गाउँ गाउँमा डुली घुमेर समय र परिस्थिति अनुसार चल्न तथा विकृति र विसङ्गतिमा नरुमलिन आग्रह र आह्वान गर्दै हिँडे ।
निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको दबदबा भएको उक्त समयमा फाल्गुनन्दलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक जनचेतना फैलाउने कार्यहरू गर्नसमेत सहज थिएन । राज्यले मानेको र भनेको धर्म, संस्कृति र भाषाबाहेक अरुको बारे जनचेतना जगाउने कार्यगर्न समेत बन्देज थियो । किरात लिम्बूहरूको आफ्नो धर्म संस्कार मान्ने र भाषा बोल्ने आफ्नै मौलिक मुन्धुम र संस्कार र भाषा लिपि थिए । यद्यपि, वहाँले त्यतिखेर प्रचलित जोसमनी पन्थ तथा हिन्दूधार्मिक संस्कारको शैलीमा कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मैले त राज्यको धर्म हिन्दू धर्मसंस्कार नै फैलाउने कार्य गरिरहेको छु भन्ने देखाउँदै किरात कर्म संस्कार, संस्कृति र मुन्धुमी ज्ञानका चेतनाहरू प्रचार प्रसार गर्नुप¥यो । यति गर्दागर्दै पनि फाल्गुनन्दलाई विभिन्न पोलझोसमा धनुकुटागौंडा देखि वि. सं. २०११ मा काठमाडौंसम्म झिकाई लगेर सोधपुछ र केरकार गर्ने कार्य भयो ।
यस्तो असहज परिस्थितिका बावजुत पनि महागुरु फाल्गुनन्दले विशेषतः किरातहरूको मौलिक धर्म, संस्कृति, भाषा र लिपिको संरक्षण र संवद्र्धनमा विशेष योगदान पु¥याए । त्यसका लागि वि.सं १९८८ साल बैशाख २४ गते पाँचथरको लबे्रकुटी माङ्हिम सिलौटीमा १० लिम्बुवान १७ थुमका सबै प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर विशेष सम्मेलन गरे । यस भेलाले एक मुचुल्का पारित गराई घोषणा ग¥यो । यसलाई वि.सं १९८८ सालको सत्यधर्म मुचुल्का रुपमा चिनिन्छ र मानिन्छ । यसमा विशेषतः मौलिक सैवापूजा गर्ने, मन्दिर (माङ्हिम) बनाई त्यसको हाताभित्र मातृभाषाको विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, सेवापूजा गर्दा जीवहत्या नगर्ने, छोरीचेलीको अनावश्यक सोतरीत नलिने, धुम्रपान र मद्यपान नगर्ने तथा तान बुनी स्वदेशी पोशाक मात्र लगाउने लगायतका बुँदाहरू रहेका छन् ।
यसरी महागुरु फाल्गुनन्दले तत्कालीन राजनैतिक तथा सामाजिक परिवेशमा हराउन लागेको मौलिक धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि र साहित्यको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए । साथै, किरात तथा लिम्बू राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई जागाउन र मजबुत बनाउन विशेषतः किरात लिम्बू भाषा तथा लिपिको माध्यममार्फत् विशेष टेवा पुर्याए । वहाँका धार्मिक उपदेश र मुन्धुमशास्त्रहरू अहिले विश्व शान्ति र मानव एकताका लागि देश–विदेशसम्म फैलिइरहेको छ । यसैको प्रतिफल स्वरुप अहिले पनि लिम्बुवानमा किरात लिम्बू भाषा, साहित्य र लिपि बचेको छ । किरात तथा लिम्बुवानी राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको मोह जीवन्त छ । यसैको आधारमा अहिले पनि किरात तथा लिम्बुवान पहिचान जीवन्त छ । यस अभियानलाई अझ जीवन्तता र निरन्तरता दिन पहिचानको आन्दोलन पनि जारी छ ।
(सभारः गोरखापत्रमा २०७४ कार्तिक २५ मा प्रकाशित)